အရှင်ဘုရား ကျန်းမာပါရဲ့လားဘုရား။ တပည့်တော်အား မရှင်းလင်းတဲ့မေးခွန်းများ၊ ပြဿနာ များအား မေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဘုရား။ သိုက်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး တပည့်တော် သိချင်ပါတယ်ဘုရား။ များသောအားဖြင့်လူတွေက သိုက်မှာနေတယ်တို့၊ သိုက်ကလာတယ်တို့၊ သိုက်ကစောင့်ရှောက်တယ်လို့ ယုံကြည်နေကြတာတွေရှိပါတယ်ဘုရား။ တကယ်တော့ သိုက်ဆိုတာ အစွဲတွေကြောင့် မကျွတ်မလွတ် ဘဲဖြစ်နေတဲ့ ဝေမာနိကပြိတ္တတွေပဲလို့ တပည့်တော် နားလည်ထားပါတယ်ဘုရား။ အဲဒါကို လူတွေဘာကြောင့် ပူဇော်ပသကိုးကွယ် နေကြတာလဲဘုရား။
(တပည့်တော်နဲ့ညီမလေးတစ်ယောက်လိုခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆိုရင်) သူ့အမလိုခင်တဲ့ သူတစ်ယောက်က သိုက်ကလာတယ်၊ သူမွေးတော့လည်း စီးပွားတွေတတ်လာတယ်။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရား။ နောက်ပြီး သူသေသွားတော့ သိုက်မှာပြန်သွားဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုလည်း စောင့်ရှောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရား။ သူ့မွေးနေ့ရောက်ရင် အမွှေးနံတွေပေးလေ့ရှိတယ်၊ အိပ်မက်ပေးလေ့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရား။ အဲဒီအတွက် တပည့်တော်တို့ နားလည်သိရှိအောင် ရှင်းပြပေးပါဘုရား။
နေမင်းဝေ၊ ဂျပန်၊ အပြုံးပန်းဈေးခင်းဆိုဒ်
ဒေါသဖြစ်ခြင်းဟာ သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကို ကိုယ့်အပြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ယူခြင်းပါ။ ပုထုဇဉ်မှန်သမျှ ဒေါသနဲ့ မကင်းကြပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒေါသကို ရုန်းကန်မထွက်အောင် ထိန်းသိမ်းမှ ကိုယ့်မှာအမှားနည်းပြီး အကျိုးများမှာပါ။ ဒေါသမှာ ချမ်းသာမှုမရှိဘဲ မေတ္တာမှာသာ ချမ်းသာခြင်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်ရော အများအတွက်ပါ ချမ်းသာခြင်းရချင်တယ်ဆိုရင် ဒေါသနဲ့မရင်းနှီးဘဲ မေတ္တာနဲ့ရင်းနှီးရမယ်။Hatred (Dosa) makes one have the fault of others to be of oneself. All worldly persons could not stay without hatred. However, it will be beneficial and faultless if one can control the hatred not to go beyond. There is no happiness in the hatred. There is happiess in loving-kindness (Metta). So, if one wants happiness, one has to invest Metta but not hatred.